Dhowr bilood ka hor, miyuusan iga qabsanayn miiskayga illaa 9AM ama ka dib. Maaha inaan soo daahay… waa uun in shaqadaydu i shaqaysay in ka badan intii aan ka shaqaynayay. Way macquul tahay, waxay ahayd shaqadii ugu fiicneyd ee uu qofku ka helo halkan bartamaha-galbeed. Warshadaha softiweerka, runti waan la tartami lahaa dadka waawayn si aan si fiican u helo. Waxaan ahaa Maareeye Badeecad mid ka mid ah shirkadaha ugu xawaaraha koraya - ma ahan oo keliya gobolka - laakiin waddanka. Kobaca degdega ah wuxuu keenaa caqabado badan, inkastoo.
Waxaan ka imid asal soosaaris ah, inbadan oo kamid ah aragtidayda ku aadan shaqada casriga ah wali waxay kusoo noqonaysaa xudunta injineernimada Badeecad ayaa loo qaabeeyey, la dhisay, la iibiyay oo la taageeray. Way fududahay… ilaa aad ka bilowdo koritaanka si xawli ah. Halkii aad ka bilaabi laheyd khadka cusub ee isku imaatinka, waxaad ku sii daraysaa dadka. Qiyaas eyga salka ku haya oo jiidanaya. Ku dar laba eey oo dheeraad ah iyo laba fuulayaal badan oo haddana waxaad u baahan tahay muusik weyn iyo hoggaamiye eey. Ku dar kuwo aad u tiro badan, in kastoo, eeyaduna ma yaqaaniin jihada ay u dhaqaaqayaan oo muusigga ayaa ku lumay meel ka mid ah isku dhafka.
Shaqadayda cusub, waxay u badan tahay inay shaqadu laba ilaa saddex jeer ka badan tahay inta dadku ku jiraan. Farqiga u dhexeeya ayaa ah qofna qof kale kama sugayo, in kastoo… kulligeen waan orod badinaynaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan kari karno si aan shaqada u banno. Ma jiro qof xanaaqsan, cidina kuma qaylinayso… kulligeen waan iska caawinaynaa midkeenna u dhaqaajinta sheyga iyo macaamiisheenna horay. Qaar ka mid ah macaamiisheennu aad ayey u weyn yihiin, laakiin aad bay u cafiyaan illaa iyo inta aan ka ilaalineyno xiriirka iyaga oo aan u sheegno horumarkayaga.
Taasi way ka badnaan kartaa intii aan ku gaadhay sanadkii la soo dhaafay shirkadda weyn! Ujeeddadayda halkan ma ahan inaan garaaco shirkaddii aan u shaqeeyay - weli waxaan ahay macmiil waxaanan kula talin lahaa inay yihiin kuwa ugu fiican warshadaha, waxna ma dhaafi karaan. Ujeeddadaydu waxay tahay oo keliya inaan dareenka u soo qaado xaqiiqda ah in kooxo yar yar oo iskiis u madax bannaan ay ku socon karaan xawaaraha danab. Haddii aad rabto inaad aragto horumar, ka dib meesha ka saar xafiisyada shaqada oo ku dhiirrigeli shaqaalahaaga inay guuleystaan.
Hogaamiyeyaasha Gore waxay ogaadeen inay kordhayaan meel ka baxsan tiro cayiman oo shaqaale ah waxay yareeyeen hal-abuurka waxayna yareeyeen wax soosaarka guud. Halkii uu ka kori lahaa shirkadda, Gore wuxuu si fudud u bilaabi lahaa shirkad 'cusub', isagoo muraajiceynaya khadadka wax soo saarka iyo qaabdhismeedka urur ee goob kasta. Hadda waxay hayaan in kabadan 8,000 oo shaqaale ah oo kuyaala 45 goobood. Haddii aad xisaab sameyso, taasi waxay ku saabsan tahay 177 shaqaale goob kasta - waa xisaab shaqaale aad loo maarayn karo.
Software-ka maanta ayaa isku amaahiya qaab-dhismeedkan. Looma baahna in la helo koox horumarineed oo baaxad weyn oo naftooda ah si ay u horumariyaan codsi aad u weyn oo leh cilado iyo lakabyo iyo lakabyo adag oo si qoto dheer u qarsoon Halkii, SOA kobciyaa kooxo yar yar, ismaamula. Koox kasta waxay dhisi kartaa xalal adag… waxa kaliya ee la wadaago waa sida qeybaha arjigu isugula hadlaan midba midka kale.
Noloshu way ku fiican tahay intayada yar shirkadda. Waxaan qaadaneynaa maalgalinta maalgashiga hadda (si xor ah u ila soo xiriir haddii aad tahay maalgaliye halis ah) iyo warshaduhu way furan yihiin. Qaarkood waa laga yaabaa inay diidaan, laakiin ma aaminsani inaan leenahay hal, tartame karti leh. Waxaan la jaanqaadnay oo aan ku dhexjirnay xalalka ugu fiican ee warshadaha… ka faa'iideysiga emaylka, SMS, Voiceshot, Fax, Web iyo POS teknoolajiyada si loo kordhiyo kaqeybgalka iyo faa'iidada warshadaha makhaayadaha.
Nasiib wanaag, waan caatownay, macno lahayn, waxaanna ku soconaa xawaare la yaab leh. Waxaan xiriir la sameynay shirkadaha sida aadka ah looga ixtiraamo warshadaha Makhaayada, Webka, Raadinta iyo Suuqgeynta. Warshadaha annagaa iska leh qaadashada waxaanan leenahay istiraatiijiyad iyo hoggaan aan ku dhammeyno. Mana qorsheyneyno inaan shaqaaleyno waqti dhow.
Maanta, waxaan shaqeynayaa shaqadayda - umana oggolaanayo inay i shaqeyso. Anigu waxaan joogaa xafiiska 8AM waxaanan shaqeeyaa 10 ilaa 20 saacadood oo wanaagsan oo usbuucii ka badan sidii aan sameeyay sanad kahor. Sababtoo ah waxaan helayaa qaddar jaban oo shaqo ah, waan faraxsanahay iyo wax soo saar leh. Waxaan rajeynayaa inaanan 177 shaqaale ah u heli doonin waqti dhow… ilaa iyo intaan go'aansaneyno inaan meel cusub ka saarno!